Bhuruu Heeler Lab Musanganiswa: Labraheeler Imbwa Inobereka Ruzivo - Inobereka
Bhuruu Heeler Lab Musanganiswa: Labraheeler Imbwa Inobereka Ruzivo
Iyo Blue Heeler Lab Musanganiswa ishamwari inofambidzana imbwa yakaberekerwa kushanda mumapurazi kana mapurazi.
Ivo hafu yeAustralia Mombe Imbwa uye hafu Labrador Retriever.
Musanganiswa uyu wakavimbika, wakangwara uye unoshanda nemitambo yeBlue Heelers uye hushamwari hweRabhani!
Ipo kunyangwe kwakatangira Labraheeler kuchiri kusazivikanwa, hushamwari hwavo hwave kuzivikanwa pakati pevarimi kweanopfuura makore zana.
Ramba uchiverenga kuti udzidze zvakawanda nezve iyi yakasarudzika imbwa yepurazi ...
Chii chinonzi Blue Heeler Lab Sanganisa?
Nei Tichida Iyi Sanganiswa
Bhuruu Heeler Lab Sanganisa Mutengo
Chii Chinoita Iyo Bhuruu Heeler Lab Musanganiswa Kutaridzika?
Bhuruu Heeler Lab Sanganisa Temperament
Ndidzo Imbwa Dzemhuri Dzakanaka Here?
Kuchengeta Nhungamiro (Kushambidzika, Kudyisa & Kuekisesaiza)
A Labraheeler musanganiswa weBlue Heeler uye Lab.
Inofungidzirwa kuti Blue Heelers akatanga kusangana neLabhs muzana ramakumi maviri
Ivo zvirokwazvo havasi vemumwe munhu anofarira imbwa inononoka kufamba. Ivo vanoshanda zvakanyanya uye vanogara vari vanoda zviitiko kuvadzivirira kuti varege kufinhwa. Izvi zvinoreva zvakare kuti hazvina kukodzera dzimba kana dzimba dzisina mayadhi.
Pane zvakawanda zvisirizvo zvakakomberedza hunhu hwembwa iyi uye nechitarisiko.
Vazhinji vanofungidzira kuti dzakauchikwa imbwa dzinotora mushure mevabereki vese zvakaenzana. Ichokwadi chakasanganiswa mhando dzisingatombo fungidzira:
Vamwe vane hunhu hwakakurumbira hweBlue Heeler senge vane moyo wakasindimara kana jena rebhuruu.
Vamwe vanotaridzika uye vanoita zvakanyanya seLab vane nzeve dzavo dzedhiri uye nehunhu hwakanaka.
Pane ruzivo rwushoma kwazvo nezvekuti nei Blue Heeler Lab Mixes yakaverengerwa. Vaviri mubereki vanobereka imbwa dzinoshanda saka zvinofungidzirwa kuti ivo vakarerwawo nechinangwa chimwe chete.
Musanganiswa uyu wave uchizivikanwa pakati pevarimi kweanopfuura makore zana kwe kuvimbika kwavo, vanoshanda nesimba uye kugona kufudza.
Nekudaro, ivo vachangobva kuve vakakurumbira nemhuri dzeAmerica.
Ngatitarisei kumarudzi evabereki kuti tidzidze zvakawanda nezve musanganiswa uyu.
Iyo Blue Heeler
Blue Heelers yakabva kuAustralia muma1800s.
Thomas Hall vakafudza imbwa dzemakwai neDingos nemamwe marudzi ( semuenzaniso Bull Terriers uye Dalmatians ) kugadzira Imbwa yeAustralia.
Muna 1903 Australian National Kennel Council yakagamuchira rudzi urwu ndokurutumidza kuti The Australian Heeler. Zita ravo rakachinjirwa zviri pamutemo kunzi Imbwa dzeAustralia nguva pfupi yapfuura.
Varimi vazhinji vaishandisa imbwa iyi kufudza mombe pamusoro penzvimbo dzakashata.
Ivo ndeimwe yemhando dzakakurumbira dzeAustralia asi hadzifarirwe muUnited States. Vakanga vari pamutemo vanozivikanwa neAmerican Kennel Club muna 1980.
Nhoroondo yeLabs inotanga muNewfoundland muma1500s.
Imbwa dzeNewfoundland uye imbwa diki dzemvura dzakaberekwa kugadzira St. John's Water Imbwa. Iyi imbwa yakabatsira varedzi kuunza mambure nekubata hove.
Mumakore ekuma1800 imbwa iyi yakaunzwa kuEngland uye nekukurumidza yakawana mukurumbira wekuva imbwa dzakanaka kwazvo pamitambo yekupfura. Dzimba dzemvura dzeSt. John dzakanatswa pamusoro pezvizvarwa uye dzakazozivikanwa seLabradors .
IAmerican Kennel Club yakaziva Labradors muna 1917.
Nhasi maLabhs anodiwa nevazhinji uye ari # 1 pane runyorwa rwemhando dzakakurumbira .
Idzi imbwa dzakavimbika kwazvo. Ose maBlue Heelers nemaLab vanonamata varidzi vavo uye vanozove vakatendeka kwazvo kumhuri yavo.
Ivo vanoita hukuru hwekurovedza muviri. Ivo vanoita zvakasununguka uye vanonakidzwa nemitambo yekunze uye kurovedza muviri sekushambira, kumhanya uye kugona.
Bhuruu Heeler Lab Musanganiswa ane rudo uye anoita shamwari dzinotyisa. Vanoda kupedza nguva nevaridzi vavo.
Ivo vakangwara kwazvo uye vanogona kudzidziswa kuita hunyengeri hwakawanda. Kana iwe uchigara papurazi kana mupurazi ivo vanoita imbwa huru dzinoshanda.
35 kusvika ku80 mapaundi
17 - 24.5 inches
Makore gumi kusvika gumi nemaviri
Kazhinji Blue Heeler Lab Mix mbwanana dzinotengeswa nemadhora mazana mashanu - $ 1,500.
Kune anowanzoita mashanu kusvika masere manyana mudhira imwe neimwe.
Idzi imbwa dzinoshanda zvakanyanya, dzinotamba uye dzinoparadza. Vachada moyo murefu uye kudzidziswa, kunyanya kana vakagara nhaka kuomarara kweBlue Heelers.
Mazhinji mapudzi anozvarwa aine chena mvere ( semadzitateguru avo eDalmatia ) uye ichachinja ruvara sezvavanokura.
Nekuti iyo Labraheeler imhando yakasanganiswa iwe unofanirwa kubvunza uyo anounza nezve maitiro evabereki vavo uye hunhu.
Kana uchisarudza mbwanana ita shuwa kuti unoona amai vavo . Iyi ndiyo nzira yakanakisa yekufungidzira kukura kwembwanana yako uye nechitarisiko chavo.
Bvunza nezvevabereki nhoroondo yegenewo.
Iyi yemasanganiswa haisi rudzi rwakajairika saka unozoda kutsvaga zvakanyanya kuti uwane mubatsiri anozivikanwa.
Vachave nechero maficha epanyama emhando mbiri dzevabereki, asi anogona kuoneka zvakanyanya kunge mumwe mubereki kupfuura mumwe. Ndokusaka mamwe maitiro avo achisiyana zvakasiyana ( semuenzaniso ruvara rwejasi kana nzeve ).
Kazhinji Blue Heeler Lab Musanganiswa iri imbwa iri pakati nepakati nejasi re merle . Idzi imbwa dzinowanzo kurema 35 - 80 mapaundi uye kuyera 17 - 24.5 inches.
Mhino dzavo kazhinji dema kana shava.
Nzeve dzavo dzinogona kunongedza saBlue Heelers kana kukwira pasi seRab.
Vane muviri wakareba, wakaonda sezvo vese vana vevabereki vari vane mutambo.
Bhuruu Heeler Lab Misanganiswa inowanzo kuve yakawanda-mavara uye iine zvigamba zvemhando dzakasiyana senge merle, brindle kana mavara.
Inogona kuve nhema, chena, bhuruu, tsvuku, grey, goridhe, kirimu kana matoni akasiyana e brown.
Jasi ravo rinowanzo kudonhedza pasi, pfupi uye rakatwasuka.
Musanganiswa uyu une hunhu hwakavimbika uye hunodzivirira.
Varidzi vazhinji vanofarira kushandisa iyi yakasanganiswa sevatariri nekuti ivo vanoziva imbwa yavo ichavachengetedza.
Kunyangwe iri yekudzivirira imbwa idzi dzinonakidza uye dzinotamba nemhuri dzadzo. Hunhu hwavo hunovaita vakakodzera kwazvo kune varidzi vanonakidzwa nehupenyu hwekuita uye zviitiko zvakasiyana zvemuviri.
Chekupedzisira ivo vakangwara kwazvo nekuda kwevabereki vavo vebhu. Ivo vanogona kudzidziswa kuita akawanda manomano uye kugona mukushanda kwepurazi mabasa.
Nehurombo nekuda kwehunhu hwavo hwekudzivirira imbwa dzinohukura zvakanyanya. Izvi zvakanaka kana iwe uchida imbwa yekutarisa. Zvisinei, naivo vanonetsa kuhukura nekuda kwekufinhwa, pakuuya kwevausingazive pane yako pfuma, kana kumhuka, senge tsindi.
Kuchengeta imbwa idzi kuvaraidzwa ndiko kiyi yekudzivirira zvisina basa kudzikama uye hunhu hunoparadza .
Ivo zvakare vane yakakwira kwazvo mhuka yekutyaira nekuda kweiyo Blue Heeler's feisty hunhu. Imbwa yemombe iri mavari inovapa tsika yekufudza, vangave vana kana zvimwe zvipfuyo.
Hunhu hweBlue Heeler Lab Musanganiswa hunogona kusiyana, asi kazhinji ivo vakatendeka uye vakavimbika kumhuri yavo.
Maitiro avo echisikigo anofanirwa kuchengetedzwa padhuze nevatorwa Ivo vanozvidzivirira zvakanyanya kune vavanoda uye vanozoita kana vatenda kuti muridzi wavo kana nhengo yemhuri iri munjodzi.
Idzi imbwa dzinovimba nekugona kwavo kushanda nekudzivirira.
Ona Nyaya Inoenderana: Bhuruu Merle Border Collie Nhungamiro: 5 Unofanira-Verenga Chokwadi
Blue Heelers haisi imbwa dzinoshamwaridzika dzine vana vadiki saka musanganiswa uyu ungangove wakafanana.
Labraheelers havanyanyo kuzivikanwa nekushivirira kwavo.
Vanogona kuwana hukasha zvishoma pavanenge vachitamba uye vanogona netsaona kufudza, kugogodza kana kutema mwana.
Nekuti ivo vane ruzha uye vanoda yakawanda yekurovedza muviri ivo zvakare havana kukurudzirwa kune vakuru.
Nekudaro, kumhuri dzine vechidiki, ivo mutambo wakanaka. Vechidiki vanofarira kusimba kwakaita imbwa idzi.
Iyo Blue Heeler Lab Musanganiswa ine hupenyu hwemakore gumi kusvika gumi nemaviri . Vamwe vakapfuura iri renji uye vakararama kusvika pamakore gumi nematanhatu.
Idzi imbwa dzinozove noutano hwakanaka uye hunofara kana dzikapihwa yakaenzana huwandu hwekurovedza muviri uye kukurudzira kwepfungwa.
Kusiyana kwavo kwemajini zvinovaita kuti vasanyanya kutapuriranwa kurwara chaiko nevabereki vavo vasina chavanotambura. Asi izvi hazvipe vimbiso yekuti imbwa yako inoramba iine hutano kwehupenyu hwayo hwese.
Zvimwe zvezvinetso zvakakura zvehutano zvinotaurwa murudzi urwu zvinosanganisira:
Patellar luxation inoitika apo kneecap yembwa inodonha kubva panzvimbo uye inogona kutungamira kuArthritis. Iko kune akasiyana mazinga kune kukomba kwekuparadzaniswa. Imbwa zhinji dzinokwanisa kurarama hupenyu hwakajairika nekusagadzikana kushoma.
Hip dysplasia inoitika kana mubatanidzwa wehudyu usina kukodzera zvakanaka kana kukura zvisina kujairika. Inogona zvakare kuve iri nyoro mamiriro asina zvishoma kune zvisina zviratidzo.
Kufambira mberi kwetsvo atrophy kunoitika kana imbwa ichirasikirwa zvishoma nezvishoma kuona. Inogona kuyedzwa nemajini kuitira kuti vese vabereki vanofanirwa kujekesa vasati varoorwa.
Vabatsiri vane hunhu vanozoongorora inofambira mberi retinal atrophy usati wasangana.
Chikamu chakanyanyisa chekuchengetedza rudzi urwu rwembwa ndeche kuenderana nemagetsi avo . Varidzi vanosarudza hupenyu hwakanyarara, hwekugara havakwanise kuenderana.
Bhuruu Heeler Lab Musanganiswa inoda moyo murefu, kutariswa uye nguva.
Vanoda kupedza nguva nevaridzi vadzo uye usaite zvakanaka kana vakasara vega kwenguva refu.
Musanganiswa uyu unogara uchida zviitwa kana zvekuita kuti vafare. Kufinhwa kunogona kukonzera imbwa idzi kutora kushushikana kwadzo pamidziyo uye dzinofanira kugara dzichidzivirirwa.
Tungamira Makirori ane chiuru
Idzi imbwa dzinoshanda dzinoda chikafu chinozadzwa nezvinovaka muviri uye mapuroteni kuti adzisimbise.
Iwe unofanirwa kufudza kibble iyo yakagadzirirwa imbwa dzinoshanda kana dzinoshanda pane chikafu chakagadzirirwa saizi yavo.
Bhuruu Heeler Lab Musanganiswa inofanirwa kudyiswa kaviri pazuva - ingori imwe kana maviri makapu ebhibble mangwanani uye kapu yekupedzisira yekubheka manheru.
Ita shuwa yekuvapa iwo makumi matatu maminetsi mushure mekurovedza muviri kudzivirira bloat.
Exercise Yemazuva ese
Maminitsi 60+ maminetsi
Favorite Exercise Kushambira uye Kureba Kumhanya
Maitiro akanakisa ekurovedza muviri kune imbwa dzinoshanda ari kumhanya, kushambira kana kukwira makomo.
Kuita kwezuva nezuva kwemaminitsi anopfuura makumi matanhatu kunodiwa kuti varambe vachikurudzirwa. Vanofanira kufamba kwemamaira matatu pazuva.
Pasina kurovedza muviri vanozove vanoparadza uye vane rowdy.
Mimwe mitambo inonakidza yekutamba inosanganisira kutora, kukweva kwehondo kana makosi ezvipingamupinyi.
Iyo Blue Heeler Lab Musanganiswa yakangwara uye yakatendeka - saka iwe waizofunga kuvadzidzisa kuri nyore .
Nehurombo ivo vakaomesa musoro nekuda kwemubereki wavo weBlue Heeler.
Izvo hazvikurudzirwe kune varidzi veavice kana vanhu vane dambudziko rekumisikidza kurongeka. Idzi imbwa dzinogona kuomesa musoro uye dzinoda kuve dzakanyatsodzidziswa uye kushamwaridzana.
Iwe uchazoda akawanda murwere kudzidziswa.
Kunze kwekutsungirira, iwe zvakare unozofanirwa kudzidza maitiro ekusimbisa maitiro akanaka nekusimbisa kwakanaka. Izvi zvinogona kuitwa nechingwa, matoyi kana kurumbidza.
Idzi imbwa kazhinji dzidza kuteerera kwekutanga nekukurumidza .
Ivo vanogona zvakare kudzidza yakawanda yekunakidzwa madiki senge yekutamba yakafa, roll uye kutamba.
Ita shuwa iwe takagadzirira rowdy, chiito-chakazara, yakasimba-imbwa imbwa!
Usati watora Blue Heeler Lab Sanganisa ita shuwa kuti wagadzirira kutora chikamu mune yavo inoshingairira uye ine hupenyu hwehupenyu.
Ivo imbwa yakakwana kune vanhu vanoda zvekunze. Vanogona kugadzira chipfuwo chikuru chemhuri chemhuri dzine vana vakuru asi vari nani senge imbwa dzinoshanda mumapurazi.
Idzi imbwa dzinodiwa nekuda kwekuvimbika kwavo uye kutamba. Labraheelers vanoumba yakasimba kwazvo zvisungo nevaridzi vayo uye vanoita yakanaka shamwari imbwa.
Regai tizive zvaunofunga nezve musanganiswa uyu pazasi.
Pitbull Lab Sanganisa: Chii Chaunofanira Kuziva Usati Watenga Labrabull
Iyo Perro de Presa Canario: Iyi imbwa yakanaka yemhuri here?
mazita embwa dzembwa chena
imarii imbwanana yeblue nose pitbull inodhura
kwakanaka here kuti imbwa dzidye pineapple
chii chinonzi red lab
sable refu jasi german shepherd